भोलिदेखि रा.वा. बैंकबाट सेयर धितो कर्जा कति ब्याजदरमा पाइन्छ ? Bizshala -
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भोलि बिहीबारदेखि सेयर धितो कर्जा न्यूनतम ७.३० प्रतिशत ब्याजदरमै उपलब्ध गराउने भएको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भोलि (असोज १ गते) देखि लागू हुने सार्वजनिक गरेको कर्जाहरुको ब्याजदरअनुसार सेयर धितो कर्जा न्यूनतम ७.३० प्रतिशतमै उपलब्ध गराउने भएको हो।
बैंकको आधार दर ५.८० प्रतिशत रहेको छ। बैंकले यो आधारमा न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्नेछ। अर्थात अब ग्राहकले यो बैंकबाट सेयर धितो कर्जा न्यूनतम ७.३० प्रतिशतदेखि ८.८० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पाउनेछन्।
यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गाडी कर्जा पनि आधार दरमा १.५० प्रतिशतदेखि ३.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर प्रवाह गर्ने भएको छ। ग्राहकले यो बैंकलेबाट अब गाडी कर्जा ७.३० प्रतिशतदेखि ९.०५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा पाउने छन्।
विद्युतीय सवारीसाधन कर्जा भने बैंकले ७.३० प्रतिशत ब्याजदरमै उपलब्ध गराउने भएको छ।
यस्तै बैंकले घर कर्जा पनि आधार दर ५.८० मा १.५० प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको योजनामा उपलब्ध गराउने भएको छ। महालक्ष्मी घर कर्जा भने बैंकले १० वर्ष र १५ वर्षसम्मका दुई योजनामा आधार दरमा १.५० प्रतिशतदेखि २.५० प्रतिशत प्रिमियम जोडेर प्रवाह गर्नेछ।
बैंकले शिक्षक र राष्ट्रसेवक कर्जा ८.५० प्रतिशतमा उपलब्ध गराउनेछ। व्यक्तिगत कर्जा न्यूनतम ७.८० प्रतिशतदेखि अधिकतम ९.०५ प्रतिशतसम्म उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ।
हकप्रदबाटै न्यूनतम पूँजी जुटाउने नेपाल फाइनान्सको निर्णय,
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको पहिलो फाइनान्स कम्पनी, नेपाल फाईनान्स...
एनआइसी बन्यो ‘नागरिक पेन्सन योजना’को बैंकिङ पार्टनर, अनलाइन
काठमाण्डौ । सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने, त्यस्तो...
सुखद संकेत: विप्रेषण २३% ले बढ्यो, शोधनान्तर रु.५१.४६ अर्बले
काठमाण्डौ । सरकारको तथ्याङ्कमा मुद्रास्फिति निकै तल झरेको छ...
कोरोना संक्रमित डेपुटी गभर्नर भन्छन्–‘घाँटीमा सामान्य पीडा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई...
यूनाइटेड फाइनान्सका अध्यक्ष भन्छन्–‘नवीलसँग मर्जमा जाने
काठमाण्डौ । यूनाइटेड फाइनान्सका संचालक समिति अध्यक्ष तथा...
काठमाण्डौ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले कोरोना...
नवील बैंकद्वारा 'ग्रिन पिन' सेवाको थालनी, पिन रि/सेट गर्न बैंक
काठमाण्डौ । आफ्ना डेविट, क्रेडिट, तथा प्रिपेड कार्ड प्रय�...
सिभिलले ल्यायो किसान कार्ड, बचत रकम सकिए पनि थप पैसा निकाल्न
काठमाण्डौ । सिभिल बैंकले किसानहरुको समृद्धिका लागि किसान समृद्धि...